Mianara - Changzhou Longjun Skypurl Tontolo Iainana Miaro Teknolojia Co., Ltd.
Inona ny plastika PLA?
PLA dia mijoro amin'ny Polylactic Acid. Vita avy amin'ny loharanon-karena azo havaozina toy ny starch mais na fary. Ny tsena ankehitriny dia miroso hatrany amin'ny vokatra biodegradable sy eco-friendly vita amin'ny loharano azo havaozina.
Amin'ny tontolo voafehy dia potika ny PLA, miverina amin'ny tany, ary noho izany dia azo sokajiana ho fitaovana biodegradable sy compostable.
Inona no ampiasaina amin'ny fonosana PLA?
Raha mampiasa ny iray amin'ireto entana manaraka ireto ny orinasanao amin'izao fotoana izao ary maniry mafy ny haharitra sy hampihena ny dian-tongotr'orinasa misy anao, dia safidy tsara indrindra ny fonosana PLA:
☆ kaopy (kaopy mangatsiaka)
☆ lovia salady
Inona avy ireo tombony azo amin'ny PLA
☆ Azo ampitahaina amin'ny plastika PET - Mihoatra ny 95% ny plastika manerantany no namboarina tamin'ny gazy voajanahary na menaka manitra. Ny plastika mifototra amin'ny lasantsy dia tsy mampidi-doza fotsiny; loharanom-pahalalana voafetra ihany koa izy ireo. Ny vokatra PLA dia manolotra fanoloana azo ampiasaina, azo havaozina ary azo oharina.
☆ Mifototra amin'ny bio - Ny fitaovan'ny vokatra biolojika dia avy amin'ny fambolena na zavamaniry azo havaozina. Satria ny vokatra PLA rehetra dia avy amin'ny mosary siramamy, ny asidra polylaktika dia heverina ho miorina amin'ny bio.
☆ Azo simbaina - Ny vokatra PLA dia mahatratra ny fenitra iraisampirenena momba ny biodegradation, manala baraka voajanahary fa tsy miangona ao anaty fanariam-pako. Mila fepetra sasany ny fanimbana haingana. Amin'ny fotodrafitrasa fananganana indostrialy dia mety hirodana izy ao anatin'ny 45-90 andro.
☆ Tsy mamoaka setroka misy poizina - Tsy toy ny plastika hafa, ny bioplastika dia tsy mamoaka setroka misy poizina rehefa may.
☆ Thermoplastic - thermoplastic ny PLA, noho izany azo ovaina sy mora volavolaina izy rehefa mafana amin'ny hafanan'ny hafanana. Izy io dia azo nohamafisina ary atsofoka amin'ny endriny isan-karazany ka mahatonga azy io ho safidy lehibe amin'ny fonosana sakafo sy ny fanontana 3D.
☆ nankatoavin'ny FDA - Ny asidra polylactic dia ankatoavin'ny FDA ho toy ny polymer ankapobeny ekena ho azo antoka (GRAS) ary azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo.